Mitondra ny satroboninahitry ny mpandresy
“Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain’ny Fanahy amin’ny fiangonana. Izay maharesy dia tsy hosimban’ny fahafatesana faharoa” Apôk. 2:11
Ny teny hoe “Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain’ny Fanahy amin’ny fiangonana” dia miverina aorian’ireo teny fikasana, mavesa-danja tokoa izany ho an’ny zanak’Andriamanitra. Tombontsoa ho antsika ny mahafantatra sy mahazo izay lazain’ny Fanahy amin’ny fiangonana, ary tokony hikatsaka fatratra ny fahazavana sy ny fahalalana isika mba hahafantarantsika ny didin’Andriamanitra sy ny teny fikasany ao amin’ny Teniny sarobidy. Na ho voavonjy , na ho very ny fanahintsika, izany indrindra no tokony hanontaniantsika tena amin-kafanam-po hoe: “Inona no tokony hataoko hahazoako ny fiainana mandrakizay? ” Fohy tokoa ny fiainana, ka zava-dehibe ny hiainantsika izany amim-pirindrana amin’ny lalàn’Andriamanitra , izay lalàna mifehy izao tontolo izao misy rehetra izao. Tokony hanana sofina handre sy fo hahazo izay lazain’ny Fanahy amin’ny fiangonana isika.
Tsy manana fahalalana ambony kokoa noho ny fahafantarana ny sitrapon’Andriamanitra ireo Anjeliny, ary fifaliana lehibe ho azy ireo ny manatanteraka ny sitrapo fanaperan’Ilay Ray any an-danitra.
Manana tombontsoa hahatakatra ny sitrapon’Andriamanitra ny olombelona efa lavo. Raha mbola omena antsika ny androm-pahasoavana, dia tokony hampiasa araka izay tratra ny fahafaha-manao ananatsika rehetra isika, mba hahafahantsika manao izay mety ho vitantsika, ary eo am-piezahana hanatratra fatra ambony amin’ny fahaizana dia tokony hanana fiankinana amin’Andriamanitra isika, satria raha tsy noho ny fahasoavany, dia tsy hitondra ho amin’ny tombontsoa maharitra ny ezaka ataontsika. Amin’ny alalan’ny fahasoavan’i Kristy no hahatonga antsika haharesy, ny fahamendrehan’ny rany no hahatonga antsika ho anisan’ireo izay manana ny anarana tsy voakosoka ao amin’ny bokin’ny fiainana.
Ireo maharesy amin’ny farany no hanana fiainana mitovy amin’ny an’Andriamanitra, ary hitondra ny satroboninahitry ny mpandresy. Raha valisoa lehibe sy maharitra mandrakizay toy izany no miandry antsika, tokony hanatanteraka ny fihazakazahana amim-paharetana isika, ary mibanjina an’i Jesôsy Ilay tompo sy mpanefa ny finoantsika.